Akwụkwọ Augustin Prot na Martech Zone |
Edemede site na Onyeka
Augustin bụ ngalaba-nchoputa nke Weglot, ihe ngwọta dị ọtụtụ asụsụ maka weebụsaịtị. Emepụtara na 2016 - Weglot wuru iji mee ka ntụgharị webụsaịtị dị ngwa, dị mfe, na ozugbo. Site na nzụlite ego, Augustin kwagara ụwa SaaS iji chọta ihe ngwọta na-enyere ụlọ ọrụ aka ịmịpụta mba ụwa.
Ecommerce Global: Akpaaka na igwe na nsụgharị ndị mmadụ maka ịkọwapụta obodo
Wednesday, November 18, 2020 Wednesday, November 18, 2020 Onyeka
Ecommerce gafere ókèala na-aga n’ihu. Ọbụna naanị afọ 4 gara aga, akụkọ Nielsen tụrụ aro na 57% nke ndị na-azụ ahịa zụtara n'aka ndị na-ere ahịa na mba ofesi na ọnwa 6 gara aga. N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, COVID-19 zuru ụwa ọnụ nwere mmetụta dị ukwuu na mkpọsa na gburugburu ụwa. Adobe na ngwa agha zubela budata na US na UK, na ojuju nke ngụkọta mkpọsa ahịa na US afọ a na-atụ anya ka okpukpu abụọ